Ubusi Studio Apartment / Old Town
Indlu yale mihla kwimbali, eyalungiswayo ukusuka ngenkulungwane ye-19 kumbindi wesixeko. Ibekwe kufutshane nezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi: iPomeranian Dukes' Castle, iChrobry Embankments, iiboulevards ezimangalisayo zasedolophini, iPhilharmonic kunye neemyuziyam - konke kuhambo lwemizuzu emi-5. Kukho iiklabhu ezininzi ezinomculo ophilayo, ii-pubs, iindawo zokutyela kunye neekhefi.
Isiqalo esihle sokuhlola iSzczecin!
Zonke iindwendwe zibonelelwa ngelinen yebhedi ecocekileyo, iitawuli, iimveliso zokucoca zobuqu (ishampoo, ijeli yeshawa, iphepha lendlu yangasese) kunye neseti eyamkelekileyo yeNespresso Essenza ecinezela umatshini wekofu.
Le ndlu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo: isitovu, ifriji, iseti yeembiza kunye nekhitshi kunye neseti eyamkelekileyo: ikofu, iti kunye namanzi amaminerali.
Sibonelela nge-intanethi enesantya esiphezulu (i-wi-fi) kunye ne-intanethi ye-TV: i-ROKU ngesiNgesi, isiJamani, isiRashiya, isiFrentshi kunye nesiPolish.
Iimephu zasimahla, iincwadi zesikhokelo kunye nemiyalelo emifutshane yokujikeleza isixeko kuzo zonke iindwendwe ziyafumaneka.
4.97 ·Izimvo eziyi-154
4.97 · Izimvo eziyi-154
Kwiyadi yendlu yokuqeshisa enguNombolo 14/15 ukususela ekupheleni kwekhulu le-19 ukuya kwi-1980, kwakukho umphunga kunye nebhafu yaseRoma (uStettiner Hallenschwimmbad). Ngexesha laphambi kwemfazwe, yayineendawo zokuhlambela kunye nokuphilisa, utyando logqirha kunye namachibi amabini okuqubha. Into iye yaphuculwa amaxesha amaninzi; ngo-1985 yavalwa kwaye izakhiwo zokuhlambela zadilizwa okanye zakhiwa kwakhona.
Moje życie to : cudowna druga połówka i wspaniałe dzieci, dobre książki i fanatyczna jazda na rowerze, pomiędzy treningami na ... rowerze ;)
Ndinika iindwendwe zam isandla sasimahla, kodwa ndiyafumaneka ukuba ziyandidinga
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Szczecin